Tantara - Filter Tech
2002 Nanomboka ny tantarantsika
Ny fahaizanay manamboatra ampahany plastika dia nitondra anay nankany amin'ny filtration rano napetraka. Nanomboka ny R&D momba ny teknolojia fanivanana rano izahay ary nanolotra mpanjifa amerikana amina cartridges sy singa ilaina amin'ny asa-tanana.
2008 làlana mankany Tech Tech
Rehefa nihitatra ny asa fanivanana rano dia nafindra tany amin'ny toerana vaovao, Tong'an, Xiamen, toerana misy antsika ankehitriny ny toerana misy anay.
2010 Mitsangàna amin'ny fotoana
Nisondrotra tampoka ny tsenan'ny fanivanana rano ao Shina, niteraka ny fanavaozana ny orinasan-tsivana fanivanana rano. Miaraka amin'io fotoana io, naorina mahaleo tena ny Xiamen Filter Tech Industrial Corporation.
Manomboka ny fitsangatsanganana an-tanety 2012
Ny fianarana momba ny Toyota Production System (TPS) dia nanome aingam-panahy antsika handray andraikitra sy hanatsara ny fandaminana. Manome ny heviny momba ny TPS izahay amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny rafitra fiasanay, Runner Production System (RPS), hanatsarana ny fahombiazany.
2015 amin'ny fikatsahana kalitao
Nanambola 5 tapitrisa dolara, nanomboka nanamboatra ny dingana voalohany amin'ny laboratoara fitiliana ao an-trano ny Filter Tech mba hampiakarana ny fenitry ny fikolokoloana ny rano fisotro anao.
2016 Taona iray an'ny voninahitra
Tamin'ny volana martsa 2016 dia nanomboka nihazakazaka ny ozinina fanaovana cartridge sivana faharoa;
Tamin'ny volana aprily 2016, laboratoara fanandramana fanivanana rano ao an-trano napetraka;
Tamin'ny volana Desambra 2016, ny Filter Tech dia nanome ny anaram-boninahitra "National High-tech Enterprise".
Fiaingana vaovao 2017
Ny Filter Tech dia lasa iray amin'ireo orinasam-panjakan'ny Runner Group.
2018 mahatratra haavo vaovao
Ny laboratoara fitiliana ao an-trano an'ny Filter Tech dia nankatoavin'ny China National Accreditation Service for Conformity Penilaian (CNAS).
Fitaovana fitsaboana rano, Cartridge fanoloana rano, Rafitra Osmosis miverimberina amin'ny trano feno, Sivanin'ny rano ao an-trano, Fanadiovan-drano ho an'ny trano iray manontolo, Rafitra fanivanana rano Osmosis tsara indrindra,